Umboniso wemagazini | Creatives Online
Ii-mockups ziya zithandwa ngakumbi. Baye baba yinto ebaluleke kakhulu kuyilo lwegraphic enkosi kwinto yokuba, kunye nabo, iingcali zinokubonisa abathengi babo iinkcazo-ntetho kwiimeko zokwenyani ezibavumela ukuba bafumane umbono wokwenene wesiphumo. Kungenxa yoko le nto kukho i-mockups yeemagazini, i-t-shirts, iincwadana, iikhalenda, njl.
Kule meko siza kugxininisa kwiimockups zemagazini, ezo ziyilo zivumela umxhasi ukuba abonise indlela iphephancwadi eliya kujongeka ngayo ngaphambi kokuba atyale imali ekushicileleni nasekuqhubeni ukubaleka, xa ukutyhala kufika ukutyhala, kungabonakali kakuhle.
1 Umboniso wamaphephancwadi, izizathu zokuzisebenzisa
2 I-12 yeemagazini zasimahla zokukhuphela
2.1 A4 umfanekiso
2.2 Umboniso wemagazini
2.3 Vula imagazini
2.4 Iphephancwadi elingaphandle
2.5 Umzobo wescene
2.6 Itemplate yemagazini epheleleyo
2.7 Ukuqokelelwa kwee-mockups kwiFreepik
2.8 Ikhava, ikhava yangasemva kunye netemplate yangaphakathi
2.9 I-Mockup eneemeko ezingama-60
2.10 Iphephancwadi lephephandaba
2.11 Isakhelo seMagazini esincinci
2.12 Umboniso wemagazini kathathu
Umboniso wamaphephancwadi, izizathu zokuzisebenzisa
I-mockup yinto enobunzima obuninzi nangakumbi phakathi kwabaqulunqi njengoko ivumela ukubonisa abathengi isiphumo somsebenzi wabo ngendlela enokwenyani.
Ngaloo ndlela, umfanekiso wemagazini iya kuba ngumfanekiso wemagazini, zombini iqweqwe kunye namaphepha angaphakathi, ngendlela yokuba umxhasi anokufumana umbono wokuba iya kujongeka njani xa sele ishicilelwe.
Kwi-Intanethi unokufumana iitemplates ezininzi zeemagazini, kunye neminye imixholo, kodwa ngaba kunenzuzo kuphela ukubona umsebenzi owenziwe kwinto enokwenene?
Inyaniso kukuba akukho. Kuba ikwasebenza njengenkuthazo kumyili ngokwakhe, onokuthi anike ipotifoliyo enenyani ngakumbi ngemisebenzi ayenzileyo kwaye ayenze ijonge kufutshane, ibanike intsingiselo, umthamo kwaye ewe, ubuchwephesha ngokunjalo.
Yiyo loo nto iipotifoliyo ezininzi nangakumbi ziqala ukutshintsha ukunika uyilo oludibanisa ubunyani kunye nezinto ezingabonakaliyo, njengemifanekiso yekhompyutha, iimpapasho, njl. Esikhundleni sokuprinta imifanekiso ngaphandle kokubanika umxholo, kule meko banikezelwa ngokumema abo babonayo ukuba bacinge into efanayo kwikhaya labo.
I-12 yeemagazini zasimahla zokukhuphela
Kule meko asizukwandisa kakhulu, kuba siyazi ukuba eyona nto ibalulekileyo kukuba neetemplates ezahlukeneyo zemagazini ukuze uzisebenzise kuyilo lwakho, ngakumbi ukuba awufuni ukuyenza ukusuka ekuqaleni. Ngoko ke, ukhetho esilucebisayo lulandelayo:
Le yenye yeetemplates ezisisiseko zemagazini, ezithi mhlawumbi ufuna ukubamba xa ufaka iifoto, kodwa oko kuya kuba nomtsalane.
Kuyo unesisombululo se-4800x4000px kunye ne-300dpi yomgangatho.
Enye inketho yile , ivuleke ize ibonakale ixhonywe esibhakabhakeni. Ikuvumela ukuba ubeke imifanekiso kwizinto ezihlakaniphile ngendlela yokuba umphumo wokugqibela ungabonwa.
Ukuba ufuna ukumnika ukubaluleka kwiqweqwe, kodwa ngaphandle kokuyityhila i-100%, le yenye yeemagazini ze-mockups onokuzisebenzisa. Kuyo awukwazi ukubona kuphela ikhava, kodwa kunye nelinye lamaphepha okuqala ephephancwadi.
Ukhutshelo lwe apha.
Ukwenza umfanekiso wemagazini ugxininiso ngakumbi kwiqweqwe lolu khetho, apho ngemvelaphi engwevu unemagazini embindini. Kodwa ungakhathazeki, ungatshintsha ngokulula imvelaphi engwevu ukuya kweminye imibala.
Enye yeengxaki ezinkulu ukuba zonke iimagazini mockups ukuba sikufundise ngaphambili kukuba imeko enye kuphela ebonisiweyo, nokuba iqweqwe okanye inxalenye engaphakathi kwiphephancwadi, kodwa kuthekani ukuba umxhasi ufuna ukubona ngakumbi?
Ke le template inokuba yile nto uyifunayo kuba i umfanekiso apho uneemeko ezintlanu ezahlukeneyo, ukusuka kwiqweqwe elingaphambili ukuya kwiphepha elingasemva, iphepha livulwa ngokulandelelanayo, elinye libe sembindini neqela lamaphephancwadi kunye.
Itemplate yemagazini epheleleyo
Enye inketho yokuba ne ikhava, ingaphakathi kunye nokuvala (oko kukuthi umbono osondeleyo) ngulo. Kuyo unganika umxhasi wakho iinkcukacha ezithile zamaphepha athile.
Ungatshintsha zombini umbala ongasemva kunye nokuthungwa.
Ukuqokelelwa kwee-mockups kwiFreepik
Kule meko Asikuniki umfanekiso womfanekiso wemagazini kuphela, kodwa ukhetho oluninzi kubo. Kwaye kukuba kwiFreepik unokufumana imifanekiso emininzi eyahlukeneyo ngokusekwe kwinto oyifunayo okanye indlela ofuna ukuyibonisa ngayo kubathengi.
Ewe, khumbula ukuba, ukuba awunayo i-akhawunti, kufuneka uchaze ububhali kumbhali. Kwaye ukuba unayo iakhawunti yeFreepik ke akunyanzelekanga ukuba uyenze.
Ikhava, ikhava yangasemva kunye netemplate yangaphakathi
Kule meko le mockup isisiseko kakhulu, kodwa iya kuthi ga apho ihamba khona, bonisa ikhava yangaphambili, ikhava yangasemva kunye nephepha elingaphakathi kabini. Hayi kwakhona.
Imvelaphi ingatshintshwa kwaye yonke into ibonakaliswe kuyo, ngaloo ndlela uthintela umxhasi ukuba ajike iphepha okanye aye kwenye indawo ukuze abone umphumo opheleleyo.
I-Mockup eneemeko ezingama-60
Ukuba ufuna ukunika umxhasi amathuba amaninzi okucinga ukuba imagazini iya kujongeka njani, unayo le nguqulo. Ihambelana nentlawulo, ngoko ikuvumela ukuba utshintshe yonke into, ukusuka kwisayizi ukuya kwisisombululo. Ukukunika umbono wokuba iya kujongeka njani, ingaphezulu kokwaneleyo.
Njengoko usazi, ngeempelaveki, ngakumbi kumaphephandaba, ziquka iimagazini ezithe ngqo, ezifana nenkcubeko, uqoqosho, njl. Ewe, ucinga ukuba akukho mfanekiso wemagazini wamaphephandaba?
Ewe kukho kwaye nanku umzekelo apho ungabonisa iqweqwe elingasemva, iqweqwe elingaphambili kunye nenxalenye yephepha lokuqala.
Isakhelo seMagazini esincinci
Ku iimagazini ezincinci, chwetheza u-A5, Oku kunokuba yindlela elungileyo yokubonisa uyilo lwephepha lakho langaphakathi.
Umboniso wemagazini kathathu
Ngaba unomfanekiso wakho ubonisa umxhasi amaphepha amathathu? Ewe ewe, ngolu khetho ungayifumana. Asikuko ukuba baya kubona amaphepha amathathu apheleleyo, kodwa inxenye yabo yenza njalo.
Njengoko ubona, kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo, kunye nezinye iimockups ezininzi zemagazini ezisimahla kwaye ungazama ukuyila kwakho. Eyona ngcebiso yethu yeyokuba uchithe ixesha elincinci ukubona ukuba ijongeka njani kwezinye iimodeli kwaye emva koko ukhethe eyona ilungileyo ukuyibonisa umthengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Ukuhanjiswa kwemagazini